Kurera uremu kumhanyisa chirongwa: Zvinoshanda here? Tsvaga Pano!
Anoshanda Snacks: Mapepa eavo vasingade kuenda kunodya!
Kushanda kunovaka muviri: Nzwisisa kuti chii uye chakakosha sei!
Zvigadzirwa	 26 March 2018
Kudya kwakaringana kwakakosha kune avo vanoda kurasikirwa. Kunyangwe kune avo vanoshandisa huremu-kurasikirwa zvigadzirwa, shanduko mukudya, kunyangwe idiki, zvakakosha kuti ikurumidze, kuwedzera mhedzisiro nekusimudzira hutano huremu uremu. Asi kuve neakadzikama kudya kunowanzoomera. Izvo chaizvo kuti ikubatsire iwe mune ino maitiro kuti iyo Kurasikirwa Kwekuwedzera Yekuwedzera Chirongwa chakagadzirwa. Isu takaunganidza mune ino posvo ruzivo rwese nezvake. Buda:
Ndekupi kwekutenga iyo Yakakurumidza Kurema Kurasikirwa Chirongwa?
Kutenga iyo Yekuwedzera Yekudzikira Kupera Chirongwa kuri nyore uye iwe unogona kuzviita izvozvi. Chirongwa chinotengeswa panzvimbo yayo Yepamutemo Saiti, saka ingo svikira iyo https://quitoplan.com.br/pae-2/, sarudza nzira yekubhadhara uye isa kero yeemail inoshanda.
Chii chekuita kutenga kwako izvozvi? Dzvanya pane bhatani pazasi uye iwe uchaendeswa kune iyo Official Webhusaiti. Kuti uwane zvimwe usati watenga yako, verenga yedu posvo kusvika kumagumo.
[junkie-alert style = "red"] Isu tiri Diet uye Hutano Webhusaiti webhusaiti iri kungo taura nezvazvo. Kuendeswazve kune iyo Yepamutemo Saiti CLICK HERE [/ junkie-yambiro]
Iyo Saiti yakachengeteka chaizvo? Ndingavimba here?
Ehe, iwe unogona kuvimba uye kuita kutenga nerunyararo rwepfungwa, sezvo Saiti iri yakachengeteka chaizvo uye yako wega uye yemari data ichachengetedzwa.
Dai vagadziri vechigadzirwa vaizobhadharisa mutengo wepakutanga wezvinhu zvese zvakaverengerwa muhurongwa, pamwe nekukosha kwemabhonasi auchazowana nekutenga, iwe waizofanira kubhadhara huwandu hwese hweR $ 746,49. Nekudaro, ivo vagadziri vanokupa iwe 2 super mabhonasi zvachose mahara uye kubhadharisa izvo zvakakwana zvinhu zvechirongwa chete Gumi nemaviri eBRL 12 kana R $ 197,00 iri mari.
CLICK HERE kutenga.
Kubhadhara chigadzirwa, unogona kusarudza slip yebhangi kana kiredhiti kadhi. Nezve kadhi, iyo Saiti inogamuchira iwo makuru mabhurani.
Chii chaizvo chiri chirongwa chekudzikira uremu nekukurumidza? Inoshanda sei?
Aya ndiwo mapurogiramu ane zvirongwa nemamenyu ayo anobatsira kukurumidza kurasikirwa kwako nekurema kwemafuta. Iyo Chirongwa ichakutungamira iwe kune chako chinangwa kuburikidza nemamaki akagadzirira-akagadzirwa uye zvinonaka uye zvakasiyana siyana mabikirwo.
Mazano: Dzidza kutevera chirongwa chinoshanda pasina kunzwa sekurwisa nzombe;
Menyu yakazara: Tsvaga yakanakisa chikafu musanganiswa;
Kuronga gwara: Dzidza kuronga, kunyanya pamazuva akabatikana;
Anoshanda uye akareruka mapipi. Sarudzo dziri nani kune avo vane shoma nguva;
Deredza matanho: Wana mhinduro nekukurumidza.
Chirongwa ichi chakanakira chero munhu anoda kudzikira huremu nekukurumidza uye hutano. Kunyanya ye:
Ndiani anoda kukurumidza mhedzisiro;
Vanhu vanoda kuomesa mafuta;
Ndiani anoda kudzikisa matanho;
Vakadzi vanoda kunzwa vane chivimbo mune bikini.
Ko uremu hwekuwedzeredza chirongwa chinoshanda here?
Haingoshanda chete, inounza mhedzisiro inoshamisa yausina kumbofungidzira. Inoshanda nekuti inoshanda pakiyi yehutano kuonda, kunova kudya kunovaka muviri, pasina chikonzero chekudya kwakanyanya. NePurogiramu Yekudzora Kurasikirwa Kwehuremu, kunyangwe vanhu vane nguva shoma vanogona kudya nenzira yakaenzanirana, iyo inoratidzwa muchiyero.
Vanhu vakati wandei vakatoyedza chirongwa uye vakave nemhedzisiro mhedzisiro.
Ndichakurumidza sei kuwana mhinduro?
Mhedzisiro inogona kuoneka mukati memavhiki ekutanga, anozosiyana kubva pamunhu kusvika pamunhu, sezvo chimwe nechimwe chipenyu chakasiyana.
Nekutenga iyo Yakawedzera Yekufutisa Kurasikirwa Chirongwa iwe uchagamuchira:
30 Mazuva Chikafu Chirongwa
30 zuva menyu
201 Mabikirwo ehupenyu hwezuva nezuva
Nekuita iko kutenga iwe unenge uchiri kuwana maviri anoshamisa mabhonasi. Ndivo:
Maitiro ekudya kunze kwemusha uye kuramba uchidzikira huremu;
Dhairiro yekutsiva: kune avo vane zvirambidzo zvekudya.
Ehe! Chirongwa Chekusimudzira Kuperesa uremu chakagadziridzwa kuita kuti hupenyu huve nyore kune avo vanoda kuonda, kunyangwe kana munhu aine nguva shoma uye nekurangwa kushoma.
Izvo zvinodzvinyirira zvakanyanya here?
Kwete, zano racho rakatosiyana. Zvinozoita kuti iwe uve nechikafu chakadzikama pasina kugadzira zvirambidzo zvakawandisa.
Inokurudzirwa nenyanzvi dzezvokudya here?
Zvirongwa zviripo muHuremu Kurasikirwa Kwekukurumidza Chirongwa zvakagadzirwa nehunyanzvi, vezvehutano vane hunyanzvi mukurema kwehuremu.
Ini ndichagamuchira sei izvo zvinhu?
Mashoko acho achatumirwa kune e-mail yaunopa kana uchitenga. Kuyeuka kuti izvo zvinhu zvinotumirwa mushure mekusimbiswa kwekubhadhara uye kuti kubhadhara nebhangi slip kunogona kutora kusvika maawa makumi manomwe nemaviri kuti asimbiswe. Kana iwe uchida kugamuchira izvo zvinhu nekukurumidza, chakanakira kuita kutenga nekadhi rechikwereti, uye iko kusimbiswa kuchabuda mumaminetsi mashoma.
Pane anogona here?
Ehe! Chero ani zvake anogona kuita chirongwa ichi. Yakagadzirwa nenyanzvi uye nekuda kweizvozvo inopa zvese zvinovaka muviri izvo munhu anoda kurasikirwa nehuremu pasina kurasikirwa nehutano. Uye zvakare ine iyo Yekutsiva Nhungamiro iyo inodzidzisa kuti vanhu vane zvirambidzo zvekudya senge lactose kusagadzikana, semuenzaniso, vanogona kuchinjisa iwo mabikirwo kune zvavanoda.
Iwe unofarira, asi une chero mibvunzo nezve chirongwa? Siya yako yekutaura! Ngatibatsirei imi.
Detox Juice: Dzidza Iyo Bhenefiti
Oxyelite Pro: Wedzera iyo Inopisa Chaiyo Mafuta!
Magasi: Maitiro ekudzivirira, izvo zvikafu zvinozvikonzera, nei zvichikonzera uye nezvimwe!
Yoga: Zvinodzora uremu here? Kuita sei? Vakadzi vane nhumbu vanogona kuzviita here? Kurasika pano!